China ABS resin injection injection mouldy Mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Resina plastika amin'ny famolahana tsindrona
Ny resina ABS (acrylonitrile butadiene styrene) no polymer be mpampiasa indrindra, ary ny famolahana tsindrona resina ABS no tena be mpitia.
Mestech dia manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana tsindrona ABS. Ny serivisy famolavolana resina ABS resin dia mamorona singa ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany sy ho an'ny fampiharana isan-karazany. Ny fitaovantsika manara-penitra dia handray haingana ny asanao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany miaraka amin'ny valiny kalitao. Ny resina ABS plastika (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) no polymer be mpampiasa indrindra. ABS dia malaza amin'ny fananana tsara amin'ny fahamendrehana dimensional, gloss, formability ary fitsaboana ambony Injecton mould dia ny fanodinana lehibe amin'ny famoronana vokatra ABS.Fananana ara-batana amin'ny resina ABS: Temperature farafahakeliny: 176 ° F 80 ° C Temperature farafahakeliny: -4 ° F -20 ° C Fahazoana Autoclave: Tsy misy teboka mitsonika: 221 ° F 105 ° C Herin'ny tensile: 4,300psi Hamafisan'ny: R110 UV fanoherana: loko tsy dia tsara: Gravity manokana tsy azo ovaina : 1.04 Tombontsoa amin'ny fametahana resina ABS resin1. toetra tsara elektrika 2. fanoherana ny fiantraikany 3. fanoherana simika tena tsara, indrindra ho an'ny asidra marokoroko, glycerine, alkaly, hydrocarbons sy alikaola maro, sira tsy an-tany 4.Mangaro ny tanjaka, henjana ary henjana amin'ny fitaovana iray 5.Miorina tsara ny fahamarinan-toerana 6. Maivana 7.Fametrahana fitoniana refy sy endrika manjelanjelatra dia tsara, mora hoso-doko, fandokoana, azo alefa amin'ny vy, elektroplating, welding ary fatorana ary fanatanterahana fanodinana faharoa. 8. ABS dia azo atao loko isan-karazany arak'izay takiana. Raha ampiana additive retardant retardant na anti-ultraviolet additive amin'ny ABS, dia azo ampiasaina hamokarana ireo singa misy amin'ny fitaovana ivelany na ny tontolo iainana ny hafanana avo.
Ny fampiharana ny resina plastika ABSABS dia manana ny dian-tongotra amin'ny fampiharana marobe noho ny fahombiazany feno sy ny fahaizany manatsara. Ireto no tena votoatiny: 1. Indostrian'ny Fiara Fiara: faritra maro amin'ny indostrian'ny fiara no vita amin'ny alloys ABS na ABS. Ohatra: fiara fitateram-bahoaka, tontonana ivelany amin'ny vatana, tontonana haingon-trano anatiny, kodia familiana, tontonana fanamafisam-peo, hidim-baravarana, mpiambina, fantson-drivotra ary singa maro hafa ABS dia be mpampiasa amin'ny haingon-trano anatiny ho an'ny fiara, toy ny boaty fonon-tànana ary fivorian'ny boaty vita amin'ny ABS mahazaka hafanana, kojakoja ambony sy ambany varavarana, saron-tava fitoeran-drano vita amin'ny ABS, ary faritra maro hafa vita amin'ny ABS ho akora fototra. Ny habetsaky ny faritra ABS ampiasaina amin'ny fiara dia manodidina ny 10 kg. Anisan'ny fiara hafa, ny habetsaky ny faritra ABS ampiasaina dia somary mahavariana ihany koa. Ny ampahany lehibe amin'ny fiara dia vita amin'ny ABS, toy ny dashboard miaraka amin'ny PC / ABS toy ny taolam-paty, ary ny velarana dia vita amin'ny sarimihetsika PVC / ABS / BOVC. 2. Fitaovana elektronika sy elektrika ABS dia mora atsofoka ao anaty akorany sy ireo faritra marina misy endrika sarotra, habe azo antoka ary fisehoany tsara tarehy. Noho izany, ny ABS dia be mpampiasa amin'ny fitaovana ao an-trano sy ny fitaovana kely, toy ny fahitalavitra, fitaovana fandraisam-peo, vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana, milina fanasan-damba, fitoeran-drivotra, mpanadio banga, milina fax an-trano, audio ary VCD. Ny ABS koa dia be mpampiasa amin'ny mpanadio banga ary ny faritra vita amin'ny ABS dia ampiasaina koa amin'ny fitaovan'ny lakozia. Ny vokatra fampindrana ABS dia mitentina mihoatra ny 88% amin'ny vokatra plastika an'ny vata fampangatsiahana. 3. Fitaovana ao amin'ny birao Satria ny ABS dia manana gloss avo lenta ary mora mamolavola, ny fitaovan'ny birao sy ny milina dia mila bika sy tarehy tsara tarehy, toy ny telefaona, boaty fitadidiana, solosaina, milina fax ary duplicator, ampahan'ny ABS no be mpampiasa. 4.Fitaovana Indostrialy Satria manana famolavolana tsara ny ABS, tsara kokoa ny manamboatra fitaovana chassis sy akorany misy habe lehibe, fiovana kely ary habe azo antoka. Toy ny dashboard fandidiana, latabatra fiasana, pisinina misy rano, boaty misy faritra sns.
Famolavolana vokatra sy bobongolo
1. Ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra: ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra dia mifandraika amin'ny halavan'ny fikorianan'ny rano, ny fahombiazan'ny famokarana ary ny fepetra ilaina amin'ny fampiasana. Ny tahan'ny halavan'ny fikorianana farany ambony amin'ny ABS dia miempo amin'ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra dia manodidina ny 190: 1, izay miova arakaraka ny naoty. Noho izany, ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra ABS dia tsy tokony ho manify loatra. Ho an'ireo vokatra mitaky fitsaboana electroplating, ny hatevin'ny rindrina dia tokony ho somary matevina kokoa mba hampitomboana ny firaiketam-po eo anelanelan'ny rakotra sy ny ambonin'ny vokatra. Noho io antony io, ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra dia tokony hofidina eo anelanelan'ny 1.5 sy 4,5 mm. Rehefa mandinika ny hatevin'ny rindrin'ny vokatra isika dia tokony hitandrina ny fitoviana amin'ny hatevin'ny rindrina, fa tsy ny fahasamihafana lehibe. Ho an'ireo vokatra mila ampidirina electroplated dia tokony ho fisaka sy tsy convex ny velarana, satria mora miraikitra amin'ny vovoka ireo faritra ireo noho ny fiatraikany elektrostatika, ka miteraka tsy fahombiazan'ny firakotra. Ankoatr'izay, ny fisian'ny zoro maranitra dia tokony hialana mba hisorohana ny fifantohana amin'ny adin-tsaina. Noho izany dia mety ny mitaky ny fifindran'ny arc amin'ny fihodinan'ny zoro, ny hatevin'ny hateviny ary ny faritra hafa.
2. Fiakarana demoulding: ny haavon'ny vokatra demoulding dia misy ifandraisany mivantana amin'ny fihenany. Noho ny naoty samihafa, ny endriny samihafa amin'ny vokatra ary ny fepetra fananganana samihafa, ny fihenan'ny famolavolana dia misy fahasamihafana kely, amin'ny ankapobeny dia 0,3 0,6%, indraindray hatramin'ny 0,4 0,8%. Noho izany, avo lenta ny famaritana ny refin'ny vokatra. Ho an'ny vokatra ABS dia heverina ho toy izao ireto tehezan-dehilahy demoulding: ny ampahany fototra dia 31 degre manaraka ny lalana demoulding, ary ny ampahany amin'ny lavaka dia 1 degre 20'ary ny lalana demoulding. Ho an'ireo vokatra manana endrika sarotra na misy litera sy lamina, dia tokony hampitomboina tsara ny fitongilanana demoulding.
3. fitakiana fanesorana: satria ny famitana ny vokatra dia misy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny fanatanterahana electroplating, ny fisehoan'ny soritra madinidinika kely dia hiharihary aorian'ny electroplating, ka ankoatry ny fepetra takiana mba tsy hisy ny fery ao amin'ny lavaka maty, ny ny faritra mahomby amin'ny fivoahana dia tokony ho lehibe, ny fampifanarahana ny fampiasana ny ejectors marobe amin'ny fizotran'ny famoahana dia tokony ho tsara, ary ny hery esaky dia tokony hitovy.
4. Exhaust: Mba hisorohana ny fihenan-tsasatra mandritra ny fizotran'ny famenoana dia alao ny tsipika miempo sy miharihary, ilaina ny manokatra lavaka vent na vent amin'ny alalàn'ny 0.04 mm mba hanamorana ny fivoahan'ny gazy avy amin'ny mitsonika santimetatra. 5. Mpihazakazaka sy vavahady: Raha te handrendrika ABS hameno ny faritra rehetra amin'ny lavaka faran'izay haingana, ny savaivon'ny mpihazakazaka dia tsy tokony ho latsaky ny 5 mm, ny hatevin'ny vavahady dia tokony ho 30% ny hateviny ny vokatra, ary ny halavan'ny ampahany mahitsy (manondro ny ampahany izay hiditra ny lavaka) dia tokony ho 1 mm. Ny toerana misy ny vavahady dia tokony ho faritana arakaraka ny filan'ny vokatra sy ny làlan'ny fivezivezena ara-materialy. Tsy avela hisy eo amin'ny tampon-kavo ny rakotra ireo vokatra mila ampidirina amin'ny herinaratra.
Fitsaboana sy haingo ambonyMora hosodokoina sy miloko ny ABS. Izy io koa dia azo esorina amin'ny vy sy electroplating. Noho izany, ny faritra ABS dia matetika voaravaka sy arovan'ny fandokoana sy ny famafazana ny tsindrona, ny fanontana vita amin'ny landy, ny elektrôlika ary ny fitombenana mafana eo ambonin'ny faritra amboarina. 1. ABS dia manana toetra mampiavaka ny tsindrona ary afaka mahazo grama, zavona, malama ary fitaratra amin'ny alàlan'ny maty. 2. ABS dia manana firaisan-doko tsara, ary mora ny mahazo loko isan-karazany amin'ny alàlan'ny fanamoriana. Ary ny fanontana pirinty litera sy lamina isan-karazany. 3. ABS dia manana toetra mampiavaka ny electrochemical plating ary izy ihany no plastika afaka mahazo metaly mora amin'ny alàlan'ny fametahana electroless. Ny fomba plating tsy misy herinaratra dia misy plating varahina tsy misy herinaratra, plating nickel tsy misy herinaratra, plating volafotsy tsy misy herinaratra ary plating chromium tsy misy herinaratra.
Previous: China OEM Die Casting Products Quotes - machining CNC - Mestech
Manaraka: Fivoriambe vokatra
Fanontana silkscreen sy haingon-trano ho an'ny ...
Famolavolana fiara sy famolahana tsindrona fiara
Vatan'ny nylon ho an'ny jiro elektrika avo lenta